मलेसिया गएका पर्वतका युवा १६ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मलेसिया गएका पर्वतका युवा १६ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन !
पर्वत, २२ असोज ।
विगत १६ वर्षअघि रोजगारीका लागि मलेसिया गएका पर्वतका एक युवा बेपत्ता भएका छन् ।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिका–१ होश्राङ्दीको अर्गाउदीका सर्वजित सुनार विगत १६ वर्षदेखि परिवारबाट सम्पर्कविहीन हुनुभएको हो । साविकको होश्राङ्दी गाविस–७ अर्गाउदीका उमाराज विक र विष्णुमाया विकका साइला छोरा सर्वजीत विक विगत १६ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएको परिवारले जनाएको छ ।
विसं २०६२ मा मलेसिया जानुभएका सर्वजीत हालसम्म परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले खोजी गरिदिन अपिल गरेको छ । छोरालाई हालसम्म सबै ठाउँमा खोजतलास गर्दा पनि कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि खोजी गरिदिन आमा विष्णुमाया विकले सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ । राम्रो लाउने मीठो खाने सपना बोकेर धन कमाउने आशामा विदेश गएको छोरा बेपत्ता भएपछि आफूहरु अत्यन्त पिरमा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरको आर्थिक समस्याले छोरालाई विदेश पठायौँ तर १६ वर्षसम्म छोराको अत्तोपत्तो नपाउँदा छोराकै पिरले हामीलाई दिनको भोक र रातको निद हराएको छ ।”
आगलागीबाट रु एक लाखभन्दा बढी क्षति– जिल्लाको बडिकेदार गाउँपालिका–३ घट्टेपाथ्थरका प्रेमबहादुर रोकामगरको घरमा आगलागी हुँदा करिब रु एक लाख ८५ हजार मूल्य बराबरको क्षति भएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बिपीनगरका अनुसार आज बिहान भएको आगलागीका कारण उहाँको घरमा भएका लुगाकपडा, सोलार सेट, रु २० हजार नगद, भाँडाकुडासहित एक तले फुसको घर जलेर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ ।
क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएको छ । स्थानीयवासीको सहयोगमा अहिले आगो नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जनाएको छ ।